Global Voices teny Malagasy » Voatsikera ho Manao “Fanavakavaham-bolonkoditra” Tamin’ny Fanasongadinana Tava Mainty ny Fahitalavi-Panjakana Shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2018 4:26 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Zo Razafy
Sokajy: Afrika Mainty, Azia Atsinanana, Shina, Fanampenam-bava, Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Pikantsary avy amin'ny fetiben'ny Lohataona Shinoa hita ao amin'ny Hong Kong Free Press.
Nosoratan'i Jun Pang Ity lahatsoratra ity ary nivoaka voalohany  tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 17 Febroary 2018. Navoaka tato amin'ny Global Voice ity dika eto ambany ity noho ny fifanarahana misy.
Voatsikera tamin'ny fanaovana tantara tsangana “manavakavaka” mampiseho mpiantsehatra mandoko mainty ny tavany ny CCTV fantsom-baovao ofisialy ofisialin'i Shina.
Avoaka fahitalavitra isan-taona ny fampisehoana Fetibe Lohataona ho fankalazana ny taombaovao manara-bolana maharitra adiny efatra. Ny 15 Febroary 2018, nanasongadina tantara tsangana iray tao Afrika ny Gala ho fankalazana ny fananganana ny lalamby notohanan'ny shinoa mampitohy ny tanànan'i Nairobi sy Mombasa any Kenya tamin'ny taona 2017.
Ampahany tamin'izany, misy vehivavy mpiantsehatra Afrikana iray miangavy mpampiantrano Shinoa iray hanampy azy handresy lahatra ny reniny tsy hanao fampihaonana azy amin'olon-kafa hiarahana. Tapaka avy eo ny sary fa mampiseho mpiantsehatra vavy iray efa lehibebe kokoa mandoko maintsy ny tavany sady manatavitavy ny fitombenany, miara-dalana amin'izany ahitana mpiantsehatra mitafy ho gidro sy zirafa. Mihevitra amim-pahadisoana ilay renim-pianakaviana fa mpifamofo ny zanakavavy sy ilay mpampiantrano.
“Tiako i Shina, nanampy anay nanangana làlamby i Shina. Te hahita vinanto lahy Sinoa aho” hoy izy.
Rehefa tonga ilay tena fofombadin'ilay shinoa mpampiatrano ka nahatapaka ny lanonana, dia nilaza ny marina tamin'ny reniny ilay zazavavy.
“Neny, mbola tanora loatra aho (ka) tsy te hanambady”, hoy izy. “Te handeha any Shina aho mba hianatra any ivelany. Te ho lasa tahaka ny vahoaka Shinoa aho, hampakatra ny tanan'akanjoko sy hiasa, mba hahazo ny fideran'izao tontolo izao.”
Nisarika ny sain'ny mpisera Weibo sy Twitter ny ampahany amin'ny fampiasana fandokoana ny tava ho mainty ho sary mahazatra rehefa mijery an'i Afrika. Fomba fanaon'ireo mpiantsehatra tsy mainty hoditra ny fandokoana ho mainty ny tava mba hanesoany ny endrika sy ny fomba fanaon'ireo mainty hoditra.
Nanoratra ny mpisera Weibo iray:
Ny fitiavan-tena tafahoatra no olana amin'ity ampahan-tantara iray ity. Mba hampisehoana fa manampy an'i Afrika izy ary milaza fa tena saro-piaro amin'i Shina ny Afrikana, ka tokony ho feno fankasitrahana an'i Shina ry zareo.Azo heverina ho samy mahazo tombony ny tetikasa fanamboaran'i Shina fotodrafitrasa?
Fanavakavahana ity fizaràn-tantara ity. Nipoaka tany amin'ny fampahalalam-baovao vahiny izy io. Azo takarina tsara izany.
Tao amin'ny twiter, menatra ilay mpisera iray:
Nanaitra ahy ny ny fampsehoana fanavakavahana tao amin'ny CCTV nandritra ny Gala lohataona ary nahamenatra ahy i Shina sy ny vahoakako. Nanana tava mainty ara-bakiteny teny amin'ny sehatra ry zareo, nanana mpiantsehatra afrikanina iray nilalao rajako sy vehivavy iray mpiantsehatra niantsoantso hoe: “Tiako i Shina!” Maneran-tany ny fanavakavahana.
Nitovy hevitra taminy ny mpisera twitter iray :
CCTV’s racist show during Spring Gala shook me and made me so ashamed of China and my people.
Nanaitra ahy ny ny fampisehoana fanavakavahana tao amin'ny CCTV nandritra ny Gala lohataona ary nahamenatra ahy i Shina sy ny vahoakako.
Artisa iray mpanao tantara an-tsary @krishraghav nilaza hoe:
Voalohany nijereko ny fampisehoana taombaovao shinoa tamin'ny CCTV ary dia navoakan-dry zareo avy any vehivavy shinoa nolokoina mainty ny tavany… miaraka amin'ny “gidro” iray zatra fonenan'olona (nolalaovin'ny lehilahy iray avy any Côte d'Ivoire) mihiaka hoe “Tiako i Shina” Tsy afaka akory aho…
Tsy ny rehetra no nahita ny tantara tsangana ho mpanavakavaka. Nilaza  i Anthony Tao, tale mpanatanteraka ao amin'ny fampitam-baovao antserasera iray antsoina hoe SupChina fa tsy nokendrena hanohintohina iny, saingy “meloka amin'ny hakamoana na ny tsy fahalalana na mety ho izy roa mihitsy” ny mpanatontosa.
Tamin'ny taona 2012, nanintsana ny zavabita tsara indrindra manerantany ao amin'ny Guinness amin'ny fahamaroan'ireo mpijery ny fahitali-pirenena, nahazo 498,7 . Nanomboka teo, nitombo ho 700 tapitrisa izany isa izany.
Heverina ho iray amin'ireo sehatra iray lehibe indrindra amin'ny famoahana propagandy politika ny Gala, ary mahasarika tsikera be dia be ihany koa izy io. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, voasivana ao amin'ny sehatra media sosialy lehibe shinoa ny fanehoan-kevitra mitsikera ny votoatin'ny Gala. Nanakana ihany koa ny lisitry ny karoka mifandraika  amin'ny Gala, toy ny “Fetin'ny Gala lohataona” + “Mampihomehy”, ary ny “Gala lohataona” + “fako” ihany koa ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy malaza indrindra ao Shina Weibo tamin'ity taona ity.
Hatramin'iny, dia nanaisotra ny drafitra ofisialin'ny tao amin'ny YouTube ny CCTV.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/24/115383/
 nivoaka voalohany: https://www.hongkongfp.com/2018/02/17/video-chinese-state-tv-lambasted-racist-lunar-new-year-sketch-featuring-actor-blackface/
 Nanakana ihany koa ny lisitry ny karoka mifandraika: https://chinadigitaltimes.net/2018/02/sensitive-words-spring-festival-gala-2018/